Kugadzira, Nyora, uye Kudhinda Ebook Rako Uchishandisa Google Docs | Martech Zone
Kana iwe wakadzika nemugwagwa wekunyora uye kutsikisa ebook, iwe unoziva kukanganisa neEPUB faira mhando, shanduko, dhizaini uye kugovera hazvisi zvekuora mwoyo. Kune akatiwandei ebook mhinduro kunze uko ayo achakubatsira iwe kuburikidza neichi chiitiko uye tora yako ebook kuGoogle Play Mabhuku, iwo Mhando uye zvimwe zvishandiso.
Ebook inzira inonakidza yemakambani kumisikidza masimba avo munzvimbo yavo uye nzira huru yekutora tarisiro yeruzivo kuburikidza nemapeji ekumhara. Ebook dzinopa ruzivo rwakadzama kupfuura irwo runyoro ruchena kana kuongororwa kweiyo infographic. Kunyora ebook zvakare kunovhura vateereri vatsva zvachose kuburikidza neiyo eBook nzira dzekuparadzira dzeGoogle, Amazon neApple.
Iko kune toni yevatongi vezvisarudzo kunze uko vanotsvaga misoro maererano neyako indasitiri uye kuverenga maebook akabatanidzwa. Vakwikwidzi vako vatovepo here? Pane mukana wakanaka wekuti iwe unogona kuwana yakanaka niche uye nhaurwa yaunogona kutsikisa iyo isina mumwe munhu achiri nayo.
Kupfuura zvese, haufanire kuhaya ebook dhizaini, kushambadzira, uye basa rekusimudzira ... unogona kungovhura nyowani Doc shandisa yako Google Workspace account uye wotanga kugadzira, kunyora, uye kutumira kunze faira raunoda kuti ubudise ebook rako nechero ipi yekiyi yekuparadzira masosi online.
Matanho Ekutsikisa Ebook Rako
Ini handitende kuti pane musiyano wakakosha mudanho rekunyora ebook sebhuku ripi neripi… matanho acho akafanana. Ebook dzemubatanidzwa dzinogona kunge dziri pfupi, dzakanangwa, uye dzichipa chakanangwa chinangwa pane yako yakajairika novel kana rimwe bhuku. Iwe uchazoda kutarisa pane yako dhizaini, kurongeka kweako zvemukati, uye kugona kwayo kukurudzira muverengi wako kutora nhanho inotevera.
Ronga bhuku rako - ronga akakosha misoro uye subtopics zvakasikwa kutungamira muverengi wako kuburikidza nezviri mukati. Ini pachangu, ndakaita izvi nebhuku rangu nekudhirowa dhayoni yebhonzo rehove.
Ronga kunyora kwako - chikamu chinowirirana, verbiage, uye maonero (wekutanga, wechipiri, kana wechitatu munhu).
Nyora runyorwa rwako - ronga kunze nguva uye zvinangwa zvekuti unozopedzisa sei rako rekutanga bhuku rako.
Tarisa girama yako uye chiperengo - usati wagovera kana kuburitsa ebook rimwe chete, shandisa mupepeti mukuru kana sevhisi senge Grammarly kuona nekugadzirisa chero zviperengo kana girama zvikanganiso.
Wana mhinduro - govera chinyorwa chako (nechibvumirano chisingazivikanwe) kune zviwanikwa zvakavimbika zvinogona kupa mhinduro pane zvakanyorwa. Kugovera mukati Google Docs yakakwana nekuti vanhu vanokwanisa kuwedzera makomendi zvakananga muchimiro.
Dzokorora runyorwa rwako - uchishandisa mhinduro, dzokorora rako gwaro.
Simbisa chako chinyorwa - iwe unogona here kuisa matipi, zviwanikwa, kana manhamba mukati mekopi yako?
Gadzira kavha yako - nyorera rubatsiro rweakakura graphic dhizaini uye gadzira mashoma akasiyana mavhezheni. Bvunza network yako inova inonyanya kumanikidza.
Mutengo wako chinyorwa - tsvagurudza mamwe ma ebook senge ako kuti uone kuti varikutengesa zvakadii. Kunyangwe iwe waifunga kuti kugovera kwemahara ingave nzira yako yekuenda - kuitengesa kunogona kuunza huchokwadi kwazviri.
Unganidza zvipupuriro - tsvaga vamwe vanokurudzira uye nyanzvi dzeindasitiri dzinogona kunyora zvipupuriro zvebook rako - pamwe kunyange kumberi kubva kumutungamiriri. Hupupuriro hwavo huchawedzera kutendeseka kubook rako.
Gadzira yako account yemunyori - pazasi iwe unowana akakosha masayiti ekugadzira emunyori maakaunzi uye mapeji emapeji pane kwaunogona kurodha ebook rako uye riitengese kutengesa
Rekodha sumo yevhidhiyo - gadzira sumo revhidhiyo iro rinopa muongororwo webhuku rako ebook nezvinotarisirwa nevaverengi.
Gadzira zano rekushambadzira - tsvaga vanopesvedzera, venhau, vepodcasters, nevanyori vevhidhiyo vangade kukubvunzurudza kuti uwedzere kuziva nezve ebook rako. Iwe ungatoda kuisa kumwe kushambadzira uye kwevaeni zvinyorwa zvakatenderedza kuvhurwa kwayo.
Sarudza hashtag - gadzira ipfupi, inomanikidza hashtag yekusimudzira uye kugovana ruzivo nezve gore ebook online.
Sarudza zuva rekutanga - kana ukasarudza zuva rekuvhura uye uchigona kutyaira kutengesa pane iro rekutanga zuva, unogona kutora ebook rako kusvika kune kutengesa kwakanyanya chinzvimbo chepike chayo mukutora pasi.
Bvisa ebook rako - buritsa ebook uye uenderere mberi nekusimudzira kwako bhuku kuburikidza nekubvunzurudzwa, zvemagariro midhiya, kushambadza, hurukuro, nezvimwe.
Bata nenharaunda yako - tenda vateveri vako, vanhu vanoongorora bhuku rako, uye ramba uchiteedzera uye kurikurudzira kwenguva yakareba sezvaunogona!
Pro Tip: Vamwe vevanyori vanoshamisa vandakasangana navo kazhinji vane zviitiko uye musangano varongi vanotenga makopi ebhuku kune avo vanopinda pane (kana kuwedzera kune) kuvabhadhara kuti vataure pachiitiko ichocho. Iyi inzira huru yekuwedzera kugovera uye kutengesa kwebook rako!
Chii chinonzi EPUB File Fomati?
Chinhu chakakosha mukugoverwa kwebhuku rako rebhuku kuronga dhizaini uye kugona kwaro kuburitsa zvakachena mune fomati repasirese iro zvitoro zvese zvepamhepo zvinokwanisa kushandisa. EPUB ndiwo muyero uyu.
Epub ndeye XHTML fomati inoshandisa iyo .epub faira rekuwedzera. EPUB ipfupi bhuku remagetsi. EPUB inotsigirwa neruzhinji rwee-e-kuverenga, uye software inoenderana inowanikwa kune mazhinji mafoni, mapiritsi, uye makomputa. EPUB chiyero chakaburitswa neInternational Dhijitari Yekutsikisa Foramu (IDPF) uye Bhuku Reindasitiri Yekudzidza Boka rinotsigira EPUB 3 seyakaenzana muyero wesarudzo yekupakata zvemukati
Kugadzira Ebook Rako muGoogle Docs
Vashandisi vanowanzo vhura Google Docs uye usashandise iyo yakavakirwa mukufomita kugona. Kana iwe uri kunyora ebook, iwe unofanirwa.
Dhizaina inomanikidza fukidza kune yako ebook mune yayo peji.
Shandisa iyo Title element yebook rako mu musoro wenyaya Peji.
Shandisa iyo Misoro neFoerser yezita rebhuku ebook uye nhamba dzemapeji.
Shandisa iyo Heading 1 element uye nyora a kuzvitsaurira mune peji rayo.
Shandisa iyo Heading 1 element uye nyora yako kubvuma mune peji rayo.
Shandisa iyo Heading 1 element uye nyora a kumberi papeji rayo.
Shandisa iyo Heading 1 chinhu chako chitsauko mazita.
Shandisa Zviri Mukati element.
Shandisa Mashoko Omuzasi element yezvinyorwa. Ive neshuwa une mvumo yekutsikirazve chero makotesheni kana rumwe ruzivo urwo urikutsikirazve.
Shandisa iyo Heading 1 element uye nyora an Pamusoro Author papeji rayo. Ive neshuwa yekuisa mamwe mazita iwe awakanyora, ako enhau midhiya ma link, uye nemabatiro anoita vanhu kukubata
Ive neshuwa yekuisa peji mabhureki pazvinodiwa. Paunotora gwaro rako rinotarisa chaizvo kuti ungade kuti riite sei, rishambadzi sePDF kutanga kuona kuti rinotaridzika chaizvo nemadiro aunoita iwe.
Google Docs EPUB Kunze
Uchishandisa Google Docs, iwe unogona ikozvino kunyora, kugadzira, uye kutsikisa kubva kune chero zvinyorwa zvinyorwa kana gwaro rakatarirwa zvakananga muGoogle Drive yako. Ah - uye mahara!
Heano Maitiro Ekuburitsa Ebook Rako Uchishandisa Google Docs
Nyora Chinyorwa chako - Tenga chero runyorwa-rwakavakirwa gwaro rinogona kushandurwa kuita Google Docs. Inzwa wakasununguka kunyora bhuku rako mu Google Docs zvakananga, kupinza kana kuyananisa Microsoft Word zvinyorwa kana kushandisa chero imwe sosi Google Drive inokwanisa kugadzirisa.
Export se EPUB - Google Docs ikozvino inopa EPUB seyakaberekerwa kutumira mafaira fomati. Ingosarudza Faira> Dhawunirodha Sezvo, ipapo EPUB Kuburitswa (.epub) uye wagadzirira kuenda!
Simbisa EPUB yako - Usati waisa EPUB yako kune chero sevhisi, iwe uchazoda kuve nechokwadi kuti yakanyatso fomatiwa. Shandisa online EPUB Validator kuve nechokwadi kuti hauna matambudziko.
Kwatinofanira Kudhinda YAKO EPUB
Iye zvino zvawave yako EPUB faira, ikozvino unofanirwa kushambadza iyo Ebook kuburikidza akati wandei masevhisi. Nzvimbo dzepamusoro dzekutora ndeidzi:
Kindle Direct Kuburitsa -Kuzvitsikisa-maBooks uye mapepa emahara ne Kindle Direct Publishing, uye kusvika mamirioni evaverengi kuAmazon.
Apple Mabhuku Ekutsikisa Portal - iyo chete yekuenda kune ese mabhuku aunoda, uye iwo auri kuda kuenda.
Mabhuku eGoogle Play - iyo inosanganisirwa mukati meiyo yakazara Google Play chitoro.
Smashwords - muparidzi mukuru wepasirese wemabhuku eie. Tinoita kuti ikurumidze, yemahara uye nyore kune chero munyori kana muparidzi, chero kupi zvako pasi, kushambadzira nekuparadzira ma ebook kune vakuru vatengesi uye zviuru zvemaraibhurari.
Ini ndaikurudzira kwazvo kurekodha vhidhiyo kuunza rako bhuku, kumisikidza tarisiro pane izvo zvirimo, uye kutyaira vanhu kurodha pasi kana kutenga iyo ebook. Zvakare, gadzira mukuru munyori bio pane chero kushambadzira sevhisi inobvumidza iyo.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye Google Workspace.
Tags: Amazonamazon mabhukuAndroidapuromabhuku eapuroeBookeBookAUNGAITAepub kutendeukaepub inoshanduraEpub inoshandaepublicationGoogle DriveMabhuku eGoogle Playsei kutiiBooks Chitoronomumotoliberioshambadzira ebookshambadza ebuphtml
WordPress: Embed MP3 Player muBlog Yako Post
Jul 24, 2014 na4: 24 PM
Yakakura Post, Thanx!
Zvita 9, 2015 na8: 17 PM
Tinogona here kugadzira bhuku pagoogle docs?
Dec 10, 2015 pa 12: 07 AM
Ini ndinotenda ivo vamwechete izvozvi, Maryam!
Jan 22, 2021 pa 9: 55 AM
Izvi zvakatanhamara. Izvo zvandaida izvozvi.
Mar 20, 2021 pa 4: 49 AM
Hukuru. Zvinobatsira zvinoshamisa. Ndatenda zvikuru 🌹
May 25, 2021 pa 7: 35 PM
Ndine 300 mapeji ane mapikicha madiki pane peji rega rega. Iyo pub inovimbisa inoti pasi pe12MB. Ko magoogle angu magogi anozove akakurisa. Ndinodzora sei mapikicha. Ivo akatsemurwa asi pikicha yese iripo ..
Jun 2, 2021 pa 12: 50 PM
Kune zvishandiso zvinoverengeka pamhepo zvekudzikira saizi yemufananidzo, asi zvakanyanya kune zvemhando yekubuda kwescreen… inova 72 dpi pazasi pekupera. Zvishandiso zvitsva zviri 300+ dpi. Kana mumwe munhu achida kupurinda ebook rako, saka 300dpi yakanaka. Ini ndaizoona kuti zviyero zvemufananidzo wangu hazvikure pane saizi yegwaro (saka usazviisa nekuzvidzora… resize it outside your ebook, wobva wainamatira imomo). Wobva wanyudza mufananidzo. Icho mufananidzo wekumanikidza chishandiso chandinoshandisa ndeche Kraken.